Fuulitaanka, xarafyada, helikabtarrada iyo waxyaabo kaloo badan ayaa imanaya PUBG Mobile 0.15.0 | Androidsis
Manuel Ramirez | | Xulka Royale, Ciyaaraha Android
Wax yar markii aan isku dayay Wicitaanka Waajibaadka Mobile, laga bilaabo Ciyaaraha Tencent lafteeda, waxaan horeyba gacanta ugu haynaa liiska buuxa ee waxa ku cusub PUBG Mobile 0.15.0 oo ay ku jiraan diyaaradaha qumaatiga u kaca, hubka cusub ee 'Desert Eagle', iyo waxqabadka kor u qaadista si loo ilaaliyo.
Waxaan ka hadalnaa hagaajinta waxqabadka maxaa yeelay waxaa jira qoraallo kooban oo laxiriira iswaafajinta labadaba muuqaal ahaan sida ku jirta FPS ee aad heli doontid markii aad rakibatid qaabkan cusub ee PUBG Mobile, dagaal royale ah oo wax walba siinaya maalmahan sababo la xiriira duulaankii weynaa ee ay qaadeen CODM.
Liiska oo dhameystiran waxa ku cusub PUBG Mobile 0.15.0
Inta aan awoodno tijaabi wanaagga PUBG Mobile Lite Jaangooyooyin awoodo hoose leh, waxaan si dhakhso leh dib ugu eegeynaa dhammaan horumaradaas ku yimid PUBG Mobile qaybteeda 0.51. Waxaan ka hadalnay dhowaan diyaaradaha qumaatiga u kaca qaabka Payload-ka cusubLaakiin waxaan sidoo kale haysannaa hub cusub, Desert Eagle, iyo astaamo badan oo kor u qaadi doona khibrada ciyaaraha.
La Desert Eagle waa bastoolad cusub oo leh saamiga ugu badan ee waxyeellada iyo xawaaraha rasaasta ee PUBG. Iyo tan ugu fiican, waxaa laga heli doonaa khariidadaha oo dhan. Laakiin waxaan dooneynaa inaan garaacno liiska si aan u furno qaniinyo cusbooneysiin ah oo imaan doonta maalinta oo dhan berrito.
Habka lacag bixinta:
EvoGround - Habka loo yaqaan 'Payload': oo ku saleysan tartanka caadiga ah, waaya aragnimada ayaa korodhay oo leh diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dagaalka dhulka iyo cirka, U tartam awoodda hubka culus iyo adeegsiga taar isgaarsiineed si loogu yeero xubnaha kooxaha la tirtiray oo aan loo iloobin ciyaar cusub, hagaajinta hubka iyo waxyaabo kale oo badan.
Helikopters: Raadin helipad khariidada jasiiradda si aad u tijaabin karto helikobtarka inay ka soo gasho dagaalka dhulka iyo sidoo kale hawada.
Super Weapon Box: sanduuqa hubka ayaa la cusbooneysiiyaa markii la hawlgeliyo ka dib daqiiqado 3 oo cusbooneysiin ah, waxaad u qaadan kartaa hubka helikabtarrada, hubka saddexda heer leh, hubka culus iyo agabyada kale.
U yeer Xubnaha Kooxda- Qaado kaarka aqoonsiga ee xubinta la tirtiray ee kooxda waxaadna aadi kartaa munaaradda isgaarsiinta si aad ugu yeerto.
RPG-7 Gantaal Launcher - Hubka gantaalaha caadiga ah.
M3E1-A gantaal: waa gantaal adeegsada gaari xamuul ah si uu u bilaabo gaari dabagal ah.
Bam gacmeed M79- Bam gacmeed qaas ah oo adeegsada bambooyin 40mm ah.
M134 hub culus oo adeegsada rasaasta 7.62mm.
Qarxinta Bam-gacmeedka MGL: Isticmaal bambooyin 40mm ah.
Soo-helista duulista hawada sare- Bambo ayuu ka tuurayaa hawada waxaana loo isticmaali karaa in lagu xiro waddooyinka ama si xeeladeysan loo daboolo.
Qalab Dayactirka Gawaarida: Ka jawaab qeyb ka mid ah qiimaha caafimaadka gaariga iyo taayirrada waxyeelleeyay si loo dayactiro.
Hubka Cusub - Eagle Desert:
Desert Eagle wuxuu leeyahay dhaawaca ugu badan iyo xawaaraha rasaasta dhammaan bastooladaha hadda ku jira PUBG. Waxaa laga heli karaa dhammaan khariidadaha.
Desert Eagle waa 62 sano jir waana la qalabeyn karaa oo leh qalab kala duwan sida aragtida dhibic cas, aragtida holographic, indhaha laser iyo in ka badan.
Marka la barbardhigo hubka kale, xaddiga waxyeelada iyo xawaaraha rasaastu waxay ka muuqataa inta kale, in kasta oo ay leedahay dib u soo kabasho weyn mar kasta oo aan xabbadda ku ridno.
Hubka wuxuu adeegsadaa .45 ammo waxaana lagu dhajin karaa 7 wareeg asal ahaan.
Waxaa lagu kordhin karaa 10 wareeg kadib markii la balaariyo joornaalkeeda.
Farsamo cusub - xajin iyo nidaamka fuulitaanka:
Hadda ah ciyaartooydu waxay ku fuuli karaan hawada iyaga oo u oggolaanaya inay guuraan saqafyada sare iyo inta udhaxeysa dhismooyinka, konteynarada, iyo boggag kale oo awal aan macquul aheyn in la galo.
Sida loo qabto xarig ama wax ka badan: ka dib markaad riixdo badhanka boodka, raadso daqiiqada saxda ah ee booskaas hawada ku jirta oo mar labaad riix batoonka boodka si aad u dhameystirto howlgalka fuulitaanka, kaas oo la heli karo marwalba.
Farsamo cusub - gasacadaha shidaalka- Qasnadaha hadda waa la qarxin karaa ka dib markii lagu ridayo hub iyo waxyaabo kale oo la tuuray. Waxay u horseedi doontaa noocyo kala duwan oo dhaawac ah ficilkeeda kala duwan.
cusub shaqada darbiyada:
Shaqadan cusub, ciyaartoydu waxay qaadan karaan qasacadaha buufinta si ay u habeeyaan walxaha qaarkood sida darbiyada.
Buufinta waa shey la isticmaali karo. Waxay qaadataa hal isticmaal oo ciyaartoydu waxay qaadi karaan ilaa 4 nooc oo kala duwan oo dagaalka ah.
The xerada ugu horeysa ee boot boot.
Hawlaha Novices: ee loogu talagalay ciyaartoy cusub, shaqooyin cusub ayaa lagu daray si loo furo.
Waxay kudareysaa hadiyad cusub oo lamaane ah:
Marka xiriirka ka dhexeeya ciyaartoyda uu gaaro 1000, cinwaan gaar ah ayaa la heli karaa.
Marka dhibcaha ay gaaraan 2000, 2500 iyo 3000, jaal cusub oo taagan ayaa la heli karaa.
Tab macluumaad ayaa lagu daray: markaad riixdo ciyaaryahanka dhanka bidix ee sheekada iyo kooxda casuumaada, macluumaadka waxaa lagusoo bandhigi doonaa dhinaca midig ee isdhexgalka.
Muuqaalka Hadiyadaha Lagu Kordhiyo: Hadiyadaha Goobta waxaa hadda lasiin karaa ciyaartoy kale inta lagu jiro wada sheekaysiga, qaab dhismeedka kooxda, iyo dagaalka gala. Albaabka laga soo galo waad ku kordhin kartaa qiimaha caan ka ciyaarista.
Haddiiku dar maqaarka bambaanooyinka: bam gacmeedka waa la habeyn karaa. Qaabka ay ku raran yihiin maqaarku ma beddeli doono dhaawaca qaraxa iyo baaxadda.
Waxyaabaha cusub ee duulimaadka dhacaya: Qiiqa buluuga iyo midabka leh ayaa lagu daray.
Waxyaabo dheeri ah oo cusub marka la isku dayayo alaabada dharka ee dukaanka ku jira.
Adoo cusbooneysiinaya macmiilka, muraayadaha indhaha iyo cimaamadu wixii hadda ka dambeeya ma wadaagi doonaan farqiga, muraayadaha indhaha iyo dhammaan wejiga aan xirneynna waa la wada xiran karaa.
Go'an qaar ka mid ah arrimaha rarka kheyraadka iyo hagaajinta aqoonta dagaalka.
Caqli galinta hubka oo la hagaajiyay. Ciyaaryahanku wuxuu noqon doonaa dheecaan badan marka uu soo galayo goobta aragtida.
Isticmaalka CPU ee ugu weyn, cunsur-ciyareedka ay sababto macangagnimada interface waa la dhimay, isticmaalka korontada iyo heerkulka qalabka waa la dhimay.
Se waxay hagaajineysaa waxqabadka qalabka hoose si loo hagaajiyo habsami u socodka waxqabadka.
Waxay hagaajisay waxqabadka hubka iyo dharka, waxay hagaajisay tayada qaabdhismeedka, qeexida moodooyinka, xisaabinta nalalka, iwm.
Ku habboonaanta hooska iyo iftiinka isdhexgalka hoolka.
Kontaroolo kala duwan oo ku habboon.
Tallaabada hubka: marka hubka kala duwan ee ciyaarta gacanta ku jiro, dhaqdhaqaaq ayaa lagu sameyn doonaa iyadoo loo eegayo nooca hubka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Tani waa liistada dhammeystiran ee wararka PUBG Mobile 0.15.0 oo leh helikabtarro, fuulitaan iyo waxyaabo kaloo badan